Ngingakwazi yini ukusebenza ku-website yami njengomhlinzeki wesikhangiso sokusesha injini yanamuhla?
Kunjengeyiphi enye imboni, izwe lanamuhla le-SEO linemikhuba nemicabango yayo. Yiqiniso, wonke umhlinzeki we-search engine optimization owaziwayo uyabazi bonke, njengoba ochwepheshe embonini bechitha usuku ngalunye lwebhizinisi basebenza ngendaba eyodwa - indlela yokuthola isimo esingcono, ngokucabangela inqwaba (uma kungenamakhulu) izici ezihlukahlukene. Iningi labo lihlobene nomthelela owenziwe ngokuqhubeka ngokuqhubekayo kokuguqulwa kwe-algorithm enkulu ye-Google.
Futhi ngikholelwa ukuthi kunamanye amathrendi noma amasu ama-SEO wendabuko ukuze asebenzise kahle. Futhi kungakhathaliseki ukuthi ungubani - umnikazi webhusayithi unomuzwa wokuntuleka kwekhono lobuchwephesha obuningi, noma i-webmaster ye-novice ezimisele futhi ekulungele ukuthola umkhuba oqhutshwe yiwo wonke umhlinzeki ohlonishwayo wokusebenzisa injini yokusesha. Ngezansi ngizobonisa ukuthi amanye amasu asebenzayo okwamanje atholakala ethandwa kakhulu emphakathini wamanje we-SEO, bobabili abathandekayo kanye ne-gurus yemboni ephethe iphothifoliyo yesikhathi eside. Ngakho-ke, ake siqale.
Ama-snippets afakiwe asevele eyaziwa cishe wonke umhlinzeki we-search engine optimization njengempendulo yezimpendulo eziphendula kumbuzo, ovame ukutholakala phezulu kwe-SERPs. Ngokuvamile, ungabona isichazamazwi esibhalwe eceleni ekhasini lomphumela ukuze unikeze wonke umsebenzisi ingqikithi yokuqondisisa okusebenzayo (ngokuvamile uthanda uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo). Uma sicabanga ukuthi izinto ezinjalo ziwusizo futhi zithandekayo, ake sizame ukuqonda i-logic yazo futhi sisebenzise. Eqinisweni, ama-snippets akhishwa yi-Google ngokusuka kokuqukethwe kwewebhusayithi enikeza impendulo egcwele kodwa emfushane kwesinye sezicelo ezivame kakhulu okwamanje ezithandwa phakathi kwabasebenzisi.
Uma ucabanga ukuthi imiboniso ibonakala cishe emaphesenti angu-30 emibuzo yokucinga futhi yenza njenge-backlink, lokho kungaba umqondo omuhle kakhulu wokuqukethwe kwewebhusayithi yakho ngolunye uhla lwamaphoyinti e-bullet ngombuzo ozokhuluma, okufanele phendula imibuzo efanele kuphela neyethando. Konke okudingayo ukutshala isikhathi sokutadisha ukuthi yiziphi imibuzo izilaleli zakho ezibhekene nazo ezikumele zibuze, bese uzama nje ukubhala impendulo engcono kakhulu. Ukwenza kanjalo, uzoba nethuba elihle lokukhuluma ngezinye izikhathi kumakhasimende akho athile.
Amakhasi ahambelana neselula
Eminyakeni emibili eyedlule, iGoogle yayisungulwe kuqala ngokuhamba phambili kweselula kwisigaba sokuqamba se-algorithm. Ngokuhamba kwesikhathi, okubaluleke kakhulu kumadivayisi aphathekayo kuguquke into into eqinisweni kufanele uqaphele futhi ngoba manje isigaba sokusesha manje sesengxenye esinqunywe yi-experience yomsebenzisi wekhwalithi, ikakhulukazi uma upheqa ngokusebenzisa ama-smartphone namathebhulethi. Ukuze wenze amakhasi weselula alayishe ngokushesha, i-Google isanda kuhambisa ubuchwepheshe obusha be-AMP. Lokho kusho ukuthi umncintiswano wezinga eliphakeme uzodinga ukuthi iwebhusayithi yakho isivele ishukumisela indlela yokuthola inguqulo ephindaphindiwe yeselula. Kepha manje, ngincoma ukuthi ujwayele ukujwayela le mkhuba omusha. Ungakwazi ukuzama kalula elinye lamathuluzi amathathu wokuhlela Iwebhusayithi atholakala ekufinyeleleni okuvulekile.
Ikusasa selisondele kakade, futhi kudingeka silingane. Ngisho ukuthi manje ukusesha ngezwi kusakhipha inani elincane lenani lokusesha eliphelele. Kodwa ngiyaqiniseka ukuthi kudingeka senze njengomhlinzeki we-search engine optimization osebenzayo, njengoba ukusesha ngezwi kuqhubeka ngokuya kakhulu, kukhishwa yizimpi ze-IT zokuhola izimali ezingenakubalwa okungenakubalwa ukuze kugcwaliswe ukuthuthukisa ukucinga ngezwi futhi ziqhube ngokugcwele ukwenza ubuchwepheshe kubantu.
Ngakho, yini esingayenza ngalokho? Kepha manje, azikho izimpendulo ezisheshayo, ngakho-ke ngincoma ukuthi ngifunde ngokujulile futhi ngicabange ngezinselele zomphakathi we-niche esingazilindela ngokushesha maduzane, mhlawumbe Source .